April 4, 2021 - Achawlaymyar
အသားဖြူလိုသူတွေအတွက် (၇) ရက်အတွင်း အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ….
April 4, 2021 by Achawlaymyar
အသားဖြူလိုသူတွေအတွက် (၇) ရက်အတွင်း အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ…. မိန်းကလေး တော်တော်များများကတော့ အသားဖြူချင်ကြမှာပါ။ မိန်းလေးတွေဟာ သူတို့အသားရေကို တန်ဖိုးထားကြပြီး၊ ဖြစ်နိုင်သမျှ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် နေလိုကြပါတယ်။ အခု D Nae Khit ကနေ ဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ ပျိုမေတွေအတွက် (၇)ရက်အတွင်း အသားဖြူစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ (1) နွားနို့အစိမ်း နွားနို့အစိမ်းမှာ အသားအရေကို ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ နွားနို့ကို ကမ္ဘာကျော် အလှဘုရင်မကြီး ကလီယိုပက်ထရာတောင် သုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမကတော့ နွားနို့ကန်ထဲမှာ စိမ်တာပါတဲ့။ အခုလည်း နွားနို့ကို Pack ပုံစံမျိုး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုံမှန်လိမ်းပေးပါ။ နေ့စဉ် ရေမချိုးခင် လိမ်းပြီး မိနစ်(၂၀)လောက် နှပ်ထားပါ။ (2) ရှားစောင်းလက်ပပ် အသားရည်ကို … Read more
လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် လူမရှိပဲရီသံတွေထွက် ကြည့်ပြီး ကြက်သီးထမိတယ်
လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် လူမရှိပဲရီသံတွေထွက် ကြည့်ပြီး ကြက်သီးထမိတယ် လှည်းတန်းလမ်းမပေါ် လူမရှိပဲရီသံတွေထွက် လှည်းတန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကအိမ်မှ ယခုအသံကို Videoရိုက်ရင်း ဖမ်းယူရရှိမိကြောင်းသိရ Video Player #crd video Zawgyi လွည္းတန္းလမ္းမေပၚ လူမရွိပဲရီသံေတြထြက္ လွည္းတန္းအနီးတစ္ဝိုက္ကအိမ္မွ ယခုအသံကို Video႐ိုက္ရင္း ဖမ္းယူရရွိမိေၾကာင္းသိရ Video Player #crd video
မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သောင်း(သိန်းပေါင်း(၇၅၀)ခန့်)လှုလိုက်တဲ့ နယ်သာလန်သူ မာယာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သောင်း(သိန်းပေါင်း(၇၅၀)ခန့်)လှုလိုက်တဲ့ နယ်သာလန်သူ မာယာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သောင်း(သိန်းပေါင်း(၇၅၀)ခန့်)လှုလိုက်တဲ့ နယ်သာလန်သူ မာယာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၅ သောင်း(သိန်းပေါင်း(၇၅၀)ခန့်)လှုလိုက်တဲ့ နယ်သာလန်သူ မာယာ Zawgyi ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္း(သိန္းေပါင္း(၇၅၀)ခန႔္)လႈလိုက္တဲ့ နယ္သာလန္သူ မာယာ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္း(သိန္းေပါင္း(၇၅၀)ခန႔္)လႈလိုက္တဲ့ နယ္သာလန္သူ မာယာ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္း(သိန္းေပါင္း(၇၅၀)ခန႔္)လႈလိုက္တဲ့ နယ္သာလန္သူ မာယာ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္း(သိန္းေပါင္း(၇၅၀)ခန႔္)လႈလိုက္တဲ့ နယ္သာလန္သူ မာယာ
ေသြးတိုးလို႔ စိတ္မညစ္နဲ႔ေတာ့ဗ်ာ….ဒီပံုထဲကလူျကီးကို ေက်းဇဴးတင္တယ္ဗ်ာ…
ေသြးတိုးလို႔ စိတ္မညစ္နဲ႔ေတာ့ဗ်ာ….ဒီပံုထဲကလူျကီးကို ေက်းဇဴးတင္တယ္ဗ်ာ… သင့္ ရွယ္ရာ တစ္ခ်က္ျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဒုကၡေဝဒနာကို ကယ္တင္ေပးလိုက္ပါ… ဒီပံုထဲကလူျကီးကို ေက်းဇဴးတင္တယ္ဗ်ာ….ေသြးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရင္မခံနိုင္ေတာ့ဘူး…. လည္ပင္းေတြအစ္ထလာျပီးစံုးဖမ္းသလိုနတ္မမ္းသလိုလိုနဲ႕ ေဂါင္းေတြကိုက္ မ်က္စိေတြမႈန္ဝါးလာျပီး ေျခေထာက္ေတလက္ေတ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းလာျပီး ေလငန္းျဖတ္ဖို ့ခ်ည္လုပ္ေနတယ္…. အရင္ ၂ ခါလဲ ေလငန္းျဖတ္ဖို ့လုပ္လို ေဆးရံု ေျပးရေသးတယ္….သူေျပာတဲ႕အတိုင္းလုပ္ထား…..အခု ေသြးမတိုးေတာ့ဘူး ….. သူေျပာတာေတာ့ ၃ ရက္ ဆက္တိုက္ မနက္တျကိမ္ ေန ့လယ္တျကိမ္ ညတျကိမ္ ၃ ရက္ ဆက္ေသာက္ရင္ အနဲဆံုး ၆လ ေလာက္ကေတာ့ ေအးေဆးပဲတဲ႕ စားခ်င္တာစားလို ့ရတယ္ဆိုပဲ….. က်ေနာ္ကေတာ့အခုမွေသာက္ထာဆိုေတာ့ ေသြးတိုးက်တာပဲသ္ိေသးတယ္ ….ဓါတ္ေျပာင္းတာျဖစ္မယ္…. ဘဲဥတလံုး သံပုရာသီတလံုးအရည္အကုန္နဲ႕ ေဖ်ာ္….အမယ္နည္းရွိသဗ်….. သံပုရာသီးကို တခ်မ္းခြဲ ဖန္ခြက္ထဲအရင္ထည့္ … Read more
နာမည္ကိုသိ႐ုံႏွင့္္ စိတ္ဓါတ္ကို သိနိုင္ေအာင္ တြက္နည္း
သင့္ရဲ့ နာမည္ကို ၾကည့္ၿပီး သင့္ရဲ့ စိတ္ေန သဘာဝ ကို အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ လို႔ ရတဲ့ နည္း ရွိတယ္။ သင့္ရဲ့လူသိမ်ားေသာအမည္ကိုေအာက္ပါအတိုင္းတြက္ပါ။ အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ = ၁ က-ခ-ဂ-ဃ-င. = ၂ စ-ဆ-ဇ-စ္-ည. = ၃ ယ-ရ-လ-၀. = ၄ ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ. = ၅ သ-ဟ. = ၆ တ-ထ-ဒ-ဓ-န-ဌ. = ၇ ဥပမာတြက္ျပမယ္ ပန္း အိ ၿဖိဳး = ၅ + ၁ + ၅ = ၁၁ ရပါတယ္ ၁၁ ထဲကေန ၁၀ ကို ႏႈတ္ပါ (၉နဲ႔ ၉ေအာက္ဆို … Read more
မိဘကို ဆဲဆိုအော်ဟစ်သူများ လက်ရှိ ဘ၀မှာတင် ခံစားရနိုင်တဲ့ ဒဏ် (၁၀)ပါး ကိုယ်က မှန်သည်ဖြစ်စေ ၊ မှားသည်ဖြစ်စေမိဘတွေကို ဒေါသတကြီး အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ပြန်လာပြောဆိုရင် လက်ရှိ ပစ္စုန်ပ္ပန် ဘဝ မှာ ဒဏ်ဆယ်ပါးထဲက အနည်းဆုံး တစ်ပါး ပါးသင့်တတ်တယ်။ ဒဏ်ဆယ်ပါး က ဘာတွေလဲ… ၁။ ကြမ်းကြုတ်သော ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း ၂။ ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီးခြင်း ၃။ အနာရောဂါဖြစ်ခြင်း ၄။ ရူးသွပ်ခြင်း ၅။ မင်းပြစ် မင်းဒဏ်သင့်ခြင်း ၆။ အကြီးအကျယ်စွပ်စွဲခံရခြင်း ၇။ မိဘ၊သားသမီး၊ဇနီးမယား၊ဆွေမျိုးများ ပျက်စီးခြင်း ၈။ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်း ၉။ နေအိမ်စသည့် မီးလောင်ခြင်း ၁၀။ ငရဲကျရောက်ခြင်း ဒါကြောင့် ကိုယ်က မှန်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ … Read more
ဆံပင်ကျွတ်တာကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
ဆံပင်ကျွတ်တာကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ဆံပင်ကျွတ်တာဟာ အမျိုးသမီးတွေသာမက အမျိုးသားတွေပါ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ တချို့ ဗောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးလိုက်ပြန်ရင် ဆံပင်ကျွတ်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်တာ သက်သာတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးပြန်ရင် ဗောက်ထရတဲ့ ပြဿနာမျိုး လူတွေတော်တော်များများမှာ ကြုံတွေ့နေရတာတွေ့ရပါတယ်။ ခေါင်းကလည်း တစ်နေ့အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်လောက်ဖြီးကြတယ်၊ မိန်းကလေးတွေဆို ဆံပင်ကို ကောက်လိုက်၊ ဖြောင့်လိုက်၊ ဆေးဆိုးလိုက်၊ ဆံပင်စည်းလိုက်လုပ်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါ ခေါင်းကိုက်နေရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတခါမှာ ဆံပင်ကျွတ်တာကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ရှားစောင်းလက်ပပ် ရှားစောင်းလက်ပပ်ဟာ ဆံပင်ကျွတ်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကို ဦးရေပြားတစ်ခုလုံး နှံ့စပ်အောင်လိမ်းလိုက်ပြီး ခြောက်အောင်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ခေါင်းလျှော်ချပြီး ပေါင်းဆေးထည့်လိုက်ပါ။ ခေါင်းလျှော်တဲ့အချိန်တိုင်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီအရည် ကြက်သွန်နီအရည်က ဆံပင်ကျွတ်တာကို သက်သာစေသလို ဆံပင်သန်စေပါတယ်။ … Read more
ျမန္မာျပည္သူမ်ားဘက္​မွ ရပ္တည္ေပးၾက​ေသာ ေဘာ္လုံးအေက်ာ္အေမာ္မ်ားပါတဲ့​ေနာ္​
ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးၾကတဲ့ ေဘာ္လုံးအေက်ာ္အေမာ္မ်ား။ ဟိန္းထက္ေအာင္ (ဆီလန္ေဂါ/ ျမန္မာ) ေဂ်ာ္ဒီအယ္လ္ဘာ (ဘာစီလိုနာ/စပိန္)။ ဟာလန္း (ေဒါ့မြန္/ေနာ္ေဝ)။ ေမာ္ရင္ညိဳ (နည္းျပ)။ ဂါးရတ္ေဘးလ္ (ရီးရဲမက္ထရစ္)။ မေလးရွားႏိုင္ငံကြာလာလမ္ပူရ္ အားကစားကြင္းမွာပရီးမီးယားလိဂ္ ၂၀၂၁ ရဲ႕ ပထမဆုံးပြဲစဥ္မွာ Selangor2FCနဲ႔ PDRM FC တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာ Selangor2FC အသင္းကျမန္မာေဘာလုံးသမားဟိန္းထက္ေအာင္က တစ္ဂိုး၊ ေဂ်ာ့ခ်္အတၱာရန္က ႏွစ္ဂိုးသြင္းယူၿပီး ၃ဂိုးသုညနဲ႔ အႏိုင္ရသြားခဲ့ပါတယ္။ ဟိန္းထက္ေအာင္က စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးလူထုအာဏာဖီဆန္မႈအေရးေတာ္ပုံရဲ႕ သေကၤတ လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္႐ႈ႕ေပးၾကေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ ေက်းဇူးလည္းအထူးတင္႐ွိပါတယ္ေနာ္။ ခရက္ဒစ္ ယူနီကုဒ္ျဖင္႔ ဖတ္ရန္ မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးကြတဲ့ ဘော်လုံးအကျော်အမော်များ။ ဟိန်းထက်အောင် (ဆီလန်ဂေါ/ မြန်မာ) ဂျော်ဒီအယ်လ်ဘာ (ဘာစီလိုနာ/စပိန်)။ … Read more
သက်မွန်မြင့် ၊ ဖွေးဖွေး၊ ကျားပေါက်၊ ကော်နီနဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန်တို့အပါအဝင် အခြားအနုပညာရှင်အယောက်(၂၀) အမှုဖွင့်ခံ
ျပည္သူဘက္က ရပ္တည္ကူညီေပးေနတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာ ရွင္ေတြ၊ ေတးသံရွင္ေတြနဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြအပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ လူပုဂၢိဳလ္ အေယာက္ ၂၀ ကို ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (က) နဲ႔ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ ရဲ့ မီဒီယာေတြက ဧၿပီ ၃ ရက္မွာ ထပ္မံ ေၾကညာပါတယ္။ အမႈဖြင့္ခံရသူေတြထဲမွာ အကယ္ဒမီမင္းသမီးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ သက္မြန္ျမင့္၊ ေဖြးေဖြး၊ အဆိုေတာ္ ေကာ္နီ၊ က်ားေပါက္၊ GFatt ၊ မယ္ရီ ၊ နိုဗန္ထူး၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ညီနႏၵ၊ ေအာင္ျမင့္ျမတ္၊ ညီထြဋ္ေခါင္၊ ဝါဆိုမိုးဦး၊ ေမဦးေမာင္၊ အိန္ဂ်ယ္လမုန္၊ ႏွင္းေသြးယုေအာင္၊ စည္သူဝင္း၊ ထက္ေအာင္ရွိုင္း ၊ Kelvin Kate ၊ ဇင္ေအာင္၊ … Read more
ကျန်းမာရေး ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူ အားလုံးနီးပါးမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ ( ၇ ) မျိူး
ကျန်းမာရေး ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူ အားလုံးနီးပါးမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ ( ၇ ) မျိူး (၁) အလုံးအကျိတ်များ သို့မဟုတ် အနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အရေပြား နဲ့ ရင်သားကင်ဆာများမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ရင်သားနဲ့ချိူင်းအောက်တွင် မာကျောသောအဖုများစမ်းမိခြင်း အရေပြား တွင် အကွက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း အလုံးအကျိတ်တစ်ခုရဲ့အလည်တည့်တည့်တွင် အနာစိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်း မွေးရာပါအမှတ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် သို့ အရွယ်ပြောင်းလဲခြင်း (၂)နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း အဆုတ်ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်ပါလက္ခဏာများရှိမရှိ ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း အဆုတ်ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်တွင် သွေးအန်ခြင်းနဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းတို့ တွေ့ရတတ်ပါသည်။ (၃)အရေပြားယားယံခြင်း သားအိမ်ကင်ဆာ ကြောင့် မိန်းမကိုယ်ယားခြင်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ ဦးနှောက်ကင်ဆာကြောင့် နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းယားခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည် (၄)အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများ အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာများအနက် ဝမ်းသွားရာမှာ သွေးပါခြင်းနဲ့ အချွဲဝမ်းသွားခြင်း ၊ဝမ်းမထိမ်းနိုင်ခြင်းတို့မှာ အတွေ့ရများသည်။ (၅)ဆီးအနည်ပါခြင်း ကျောက်ကပ်ကင်ဆာရဲ့ … Read more